6 Ihe dị mkpa gbasara SEO Atụmatụ Onye ọ bụla na-azụ ahịa ahịa kwesịrị ijide
Ivan Konovalov, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ọkachamara Digital Agency na-ekere òkè na ahụmahụ na otu esi esi rụọ ọrụSEO na-arụ ọrụ gị.
Ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ Fortune 500 kachasị mma na ụwa nke taa nwere otu ihe dị mkpa: ọtụtụ n'ime hanwere ebe nrụọrụ weebụ dị elu, nke pụtara na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti gosipụtara na nbhoputa ole na ole mbụ site na engines ọchụchọsite na ntanetị weebụ, karịsịa mgbe a na-agụnye ọnọdụ na mkpụrụokwu ọchụchọ. Otú ọ dị, ebe nrụọrụ weebụ ndị a abụghị nanị ebe ahụkpakpando. A na-eji nkà dị elu dị elu, usoro sochiri, na nyochaa. Nke ahụ bụ ihe nchịkọta nkọwaihe anyị na-eme na Semalt bụ.
Na nkọwa ya, nyocha njikarịcha ọchụchọ, nke a na-akpọkwa dị ka ahịa ahịa ma ọ bụ SEO, bụ usoro nkena-amụba ma ọ bụ na-emeziwanye ihe ngosi nke ebe nrụọrụ weebụ n'Ịntanet. Ọ gụnyere nchọpụta isiokwu, ichota ọdịnaya na isiokwu ndị dị mkpa,na iji ya mee ihe na weebụsaịtị ka o wee nwee ike ime ka mmekọrịta gị, ROI, na iguzosi ike n'ihe site ahịa gị ma ọ bụ atụmatụndị na-ege ntị. Ebe nrụọrụ weebụ dị oke mkpa mgbe ọ na-abịa SEO. Nke a bụ ikpe, n'okpuru bụ ndụmọdụ dị mkpa SEO dị mkpanke Ivan Konovalov kwadoro na ị ga-ama dị ka onye na-azụ ahịa smart.
1. Họrọ Keywords gị n'aka nri
Nye onye ọ bụla nwere ma ọ dịkarịa ala ihe ngosi banyere ihe SEO bụ, n'ozuzu ya, o doro anya na isiokwu dị oke mkpa. Ha bụndị na-akpọ ọkpọ oku na mkpọsa SEO, karịsịa ma ọ bụrụ na e tinyere ha na ọdịnaya. Dị ka nke bụ eziokwu, engines na-achọpụtansonaazụ ọchụchọ dabere na nchikota okwu ndị onye ọrụ ịntanetị tinyere site n'ịchọ ozi n'elu weebụ. Inwetaezi isiokwu gị gụnyere gụnyere isiokwu mkparịta ụka ma ọ bụ nkwupụta ha, nke azụmahịa gị ga-etinye na mgbe ị na-achọgharịmaka ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa nke azụmahịa gị..Enwere ike ịchọ ụfọdụ creativity ebe a, ọ bụ ezie na ọrụ ọkachamara SEOnwere ike inye aka ịmepụta usoro ị ga-eji mee ka ị ghara ịsọ asọmpi.
2. Jiri foto na ihe vidiyo na SEO
Nnyocha na-egosi na vidio na ihe oyiyi bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma n'ịzụ ahịa. Nke a bụ n'ihi na ha na-emekọrịta ihe namara mma ma e jiri ya tụnyere ihe ederede. Mgbe a na-eji ya ọdịnaya, vidiyo na ihe oyiyi bụ ndị na-ekpuchi anya. Hahapụ ncheta na-adịgide adịgide n'uche nke ahịa gị. Otú ọ dị, ụmụ ọhụrụ a ga-esonyekwa na nyocha ọchụchọihe omuma na ihe omuma ederede bara uru, na-ekwu nkowa na ozi ndi metutara ozi bu isina mkpọsa SEO ahụ. A na-emetụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-ere ahịa n'Ịntanet na ndị ọrụ ịntanetị ime ihe site na mmana vidiyo / foto dị mma, ya mere jide n'aka na ị na-eji ihe kacha mma i nwere ike inweta.
3. Na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị iche iche dị iche iche dị iche iche
Dịka onye na-azụ ahịa nke ọma, ọ gaghị adị njọ iche na ị maraworị na ọ bụ ụwa mobile anyị bi na ya.nke ụbọchị a na-etinyekwu oge na ngwaọrụ mkpanaka ha, nke gụnyere smartphones na mbadamba, iji tụnyere desktọọpụkọmputa na laptọọpụ PC. Ka ị ghara ịdaba na nnukwu òkè nke achicha ahụ gaa asọmpi gị, jide n'aka na ị ga-ebuligị na ebe nrụọrụ weebụ maka ime mgbanwe mobile.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ịnweta site na ngwaọrụ mkpanaka n'enweghị nsogbu ma ọ bụ nsogbu. Ụzọ a, gịndị na-ege ntị ma ọ bụ ndị ahịa echere nwere ike inweta ozi dị egwu ma ọ bụ zụta ngwaahịa / ọrụ gị. Otu enweghịchere ruo mgbe ha nọ n'ọfịs ka ha nwee ike ịhazi ụfọdụ pizza, na-eche na ọ bụ azụmahịa gị. Dị ka nke a bụ karịanke mmepụta weebụ, nke nwere SEO-enyi na enyi, nsụgharị nke mkpokọta weebụ gị ga-akwụghachi gị ụgwọ.
4. Gaa Mobile
Dị ka o doro anya na Google bụ eze nke engines ọchụchọ, ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ nhọrọ ndị ọzọ dị ka Bing na Yahoo,naanị ikwu banyere mmadụ ole na ole. Ịchọghị etinye nsen gị n'otu nkata. Iji biakute n 'ulo oru SEO gi, jide n'aka na ị ga-edo onwe gi n'okpurusaịtị gị na egwuregwu ndị ọzọ na ụlọ ọrụ nyocha ahụ, nakwa maka mgbasa ozi na ụgwọ na-akwụ ụgwọ..N'okwu a, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na yamụta otu ihe ma ọ bụ abụọ banyere otu ụzọ ụgbọelu dịgasị iche iche si chọọ weebụsaịtị.
5. Nọgide Na-ele Anya na mpaghara SEO
Ka ọrụ ebere na-amalite n'ụlọ, azụmahịa ga-eme ka ọ bụrụ n'ahịa n'ahịa n'enweghị usoro mmeri maka SEO mpaghara, karịsịama ọ bụrụ na ọ bụ mmalite. Dịka onye na-azụ ahịa maara ihe, ọ dị mkpa iburu n'uche na ahịa nke gị nwere ike ikpebi ma ị ga - achọpụta ego gịma ọ bụ agaghị enwe ihe ịga nke ọma online n'ofe ala. Ọ bụ ihe ka ukwuu banyere ịmepụta ọtụtụ okporo ụzọ dị ka o kwere mee na ebe nrụọrụ weebụ gịsite na nchọta mpaghara, nke dị oke egwu mgbe ọ na-abịa na njikwa search engine.
Iji nweta ihe kachasị n'ime mgbalị ịchọta nyocha ọchụchọ gị, ọ bụ oge dị elu ị weere iji akwụkwọ ndekọ azụmahịa azụmahịa. Njikwasaịtị ndekọ dịka ibe odo, Yelp, na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ nwere ike ịbịaru aka. Ọ dị mkpa iji hụ naozi azụmahịa gị na ndepụta mpaghara na-anọgide na-agbanwe agbanwe ma dị mma, karịsịa ileba anya otú azụmahịa gị 'na kọntaktị naE depụtara nkọwa adreesị dị iche iche na ntanetị dị iche iche dị na mpaghara.
6. Echerela ruo n'ikike n'Ịntanet gị
Ee, ị nwere ike ibudata ụfọdụ isiokwu dị mma na ibe weebụ na saịtị gị n'oge gara aga; mana nke ahụ apụtaghị na mmeliteagaghị adị mkpa ruo ọgwụgwụ oge. Onye ọ bụla nwere ụfọdụ agụmakwụkwọ bụ isi ga-ekweta na ozi ụfọdụ abaghị uruna oge. Karịsịa mgbe ọ na-abịakwute ndị na-ege ntị n'ịntanetị na ndị na-ere ahịa weebụ, ị chọghị ịhapụ ha ka ha ghara ịbanye. Na-ebugote ụfọdụ ozi ọhụrụ,ọdịnaya, na data dị mkpa ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ ga-eme ka azụmahịa gị gaa n'ihu n'egwuregwu ahụ, karịsịa mgbe ọ na-abịakwute okporo weebụ na search engineọkwa. Naanị ijide n'aka na ị na-enye ọdịnaya dị mma ma na-atọ ụtọ na ahịa gị ma ọ bụ ndị na-ege ntị ga-achọta enyemaka na itinye aka.Tụkwasị m obi, ọdịnaya bụ eze, ị gaghịkwa akwa ụta maka mgbalị SEO gị.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị aghọtaghị nke ọma, SEO bụ ihe dị mkpa nke ihe ịga nke ọma maka azụmahịa ọ bụla na arụmọrụ n'Ịntanet. Na Nchọta doro anya ma hazieusoro nyocha njikwa, na-abanyekwu okporo ụzọ, ọkwa elu nke Google, ahịa ndị ọzọ, na ụba maka azụmahịa gị, karịsịa site na ya n'ịntanetịarụ ọrụ. SEO nwere ike ịnweta oke ọrụ na oge na oge ụfọdụ, yabụ ị nwere ike ịchọrọ itinye aka na ụlọ ọrụ ọkachamara SEO iji nweta ihe kachasị mmanke azụmahịa gị online Source .